ဆောင်းဦးလင်း| July 20, 2012 | Hits:12,165
| | ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲမှာ ဗီယက်နမ် ကို ၄-၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရလို့ ကြေးတံဆိပ်ဆု ရခဲ့တဲ့ အသက်၂၃ နှစ်အောက် မြန်မာ ဘော လုံး အသင်း (ဓာတ်ပုံ – Getty Images)
DR> THET LWIN July 20, 2012 - 4:17 pm I like myanmar team.I watched the matches. I played foot ball in university.So hopping for better future,proud of our team.
Reply ကိုအောင် July 20, 2012 - 8:23 pm ၂၀၂၁ ကမ္ဘာဖလား မြန်မာ ၀င် ပြိုင် တာ မြင် ချင်လှပါဘီ။
Reply K July 21, 2012 - 6:40 pm တခြားနေရာတွေမှာလိုပဲ ဧရာဝတီကလည်း မြန်မာဘောလုံးအသင်းအကြောင်းကို ရေးတဲ့အခါ အမျိုးသားအသင်းအကြောင်းပဲ ကွက်ရေးတယ်။ သဘောမကျဘူး။ Very Sexist!
Reply soesoe324 July 27, 2012 - 11:46 am မြန်မာ့ကျွန်..ကမ္ဘာကို လွှမ်းရမည်……..
Reply ကိုကို July 28, 2012 - 11:56 pm လူငယ်တွေ ပြည်ပ ထွက် အလုပ် လုပ်နေရ သရွေ့ မည်သည့် အားကစား မျှ
Reply soe thu ko August 4, 2012 - 5:30 pm ကိုကိုေ၇ မင်းက ဗမာစစ်စစ်ကို……..အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ မပြီး ခင် ဗမာမမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလေ။ ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ နူတ်အားဖြင့် ပံ့ပိုးမယ်မစဉ်းစားဘူး….. အပျက်သဘောနဲ့ ကန့်လန့်တိုက်တာ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေပေါ့ဗျာ
Reply ဗမာ့သွေး August 10, 2012 - 1:09 pm I Agree.ဟုတ်တာပေါ့ ကိုစောသူ။ကျွန်တော့တို.လို မြန်မာတွေကမှာ အားမပေးရင်ဘယ်သူတွေ အားပေးကြမှာတုန်း။ဘာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် အားပေးရမှာဘဲ မြန်မာအားကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းပါစေ။
Reply ဖိုးထွဋ်ကြီး August 9, 2012 - 12:58 pm မြန်မာတွေရဲ့ရွှေခေတ်ပြန်ရောက်ခါနီးပြီလို့တကယ်ယုံကြည်တယ်
Reply ဦးမြင့် August 28, 2012 - 12:11 am အောင်မြင်မှုက လက်တစ်ကမ်းမှာပါ။ ကြိုးစားထားပါ။ U-22 အာရှဖလားမှာ အဆင့်တစ်ခု
Reply naung naung September 19, 2012 - 1:03 pm U-22 အာရှဖလားမှာ ရွှေမြန်မာဖြစ်စေ။